Maamulka Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed ayaa maanta u gudbiyey Golaha Shacabka cabasho dhaqaale iyo xarumo ka maqan – Kalfadhi
Maamulka Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed (JUS) ayaa maanta hor geeyey Kulanka Golaha Shacabka warbixin ku saabsan jaamacadda. Guddoomiyaha JUS, Prof. Maxamed Axmed Jimcaale, ayaa u sheegay Golaha in ay JUS haysato dhibaato dhaqaale. “”Waxaan codsanay miisaaniyad dhan 5 milyan oo doolar, haddana waxaan maqalnay in naloo qoondeeyay 3.5 milyan oo doolar sanadkii 2014-ka, Baarlamaanka ayaana ka codsanaynaa in uu nacaawiyo” ayuu yiri Prof. Maxamed Axmed Jimcaale.
Guddoomiye Kuxigeenka 2-aad ee Golaha Shacabka, Mahad Cabdalla Cawad oo kulanka shir guddoominaya, ayaa yiri “Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed waxay naga caawisay in aan uruurino dhamaan sharciyadii uu lahaa dalka, waana muhiim in la caawiyo”.
Isagoo daawadsiinaya muuqaalo ayuu Guddoomiyaha JUS, Prof. Maxamed Axmed, Golaha u sharaxay muggii iyo macnihii ay Soomaaliya u lahayd JUS, waxa uuna xusay in 6 xarumood oo ay jaamacaddu leedahay aysan badankood hadda ku hayan gacanta. “Waxaa jira ilaa 6 xarumood, oo ay ku jiraan beero iyo isbitaalo, intooda badana kuma jiraan gacanteena” ayuu yiri Guddoomiyuhu.
Iasga oo tilmaamaya sida xarumaha qaar ay uga maqan tahay jaamacadda ayuu Prof. Maxamed Axmed Jimcaale yiri “Xaruntii Jaamacadda ee KM4 waa la cabirtay. Dowladda Hoose ayaa bixisay”. Laakiin, waxa uu intaas raaciyey iney lahaanshiyaha qeybtaas hadda dib ugu soo noqotay jaamacadda. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa, ayaa yiri “caqabadaha ku hor gudban JUS waa fiicnaan laheed in aan wax ka qaban karno, sida hantida ka maqan, waana howl ay leedahay xukumadda”.
Xildhibaan Faarax Cabdulqaadir ayaa isaguna yiri “Jaamadda Ummadda Soomaaliyeed waxay mataleysaa dadka soo maaliyeed ee kala qabiilka ah, waana in loo ansixiyaa dhaqaalaha ay u baahan tahay. Waa in lasoo celiyaa hantidii ay lahayd, majirto si loo sii haysan karo hantidaas”.
Prof. Maxamed Axmed Jimcaale ayaa sheegay in kuliyadihii ugu horeeyey ee ay JUS yeelato ay ahaayeen Sharciga iyo Dhaqaalaha, balse waxa uu sheegay in markii dambe lagu soo kordhiyey kuliyado kale. Waxa uu yiri “200 oo Barafasoor, oo ka imaanayey dalka Taliyaaniga, ayaa wax ka dhigayey Jaamacadda oo la furay 1969-kii”.
Bishii Nofeember 13-keedii, 2013 ayaa dib loo furay JUS, kadib markii ay sidaas isku raaceen Golihii Wasiirada ee Xukumaddii Cabdi Faarax Shirdoon, iyadoo markaas uu Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, furay Bishii Diseember ee sanadkii xigay, kadib muddo 22 sano ahayd oo aysan JUS u shaqeyn burbur iyo dowlad la’aan dalka haystay awgeed. Sida uu sheegay Prof. Maxamed Axmed, waxaa hadda JUS dhigata 2500 oo arday.
Prof. Maxamed Axmed waxa uu u sheegay Golaha Shacabka in kuliyadaha muhiimka ah ee hadda u xayiran dhaqaala la’aan awgeed ay ku jiraan: 1) Kuliyadda Daawada, 2) Kuliyadda Culuumta Badda iyo 3) Kuliyadda Jiyoolajiyada iyo Kiimikada.